ခင်မင်းဇော်: ၂၀၀၉ ကို နှုတ်ဆက်ခြင်း
Posted by ခင်မင်းဇော် at 4:11 PM
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရေးချင်လုို့ ရေးထားတဲ့ ဘလော့ဂ်ပဲ ဘာဖြစ်လဲ လုပ်သာလုပ်။ အင်းပေါ့ facebook မှာ ဝင်ပြီး ဆော့နေရတော့ ဒီဘက် ဘယ်လှည့်နုိုင်ပါ့မလဲနော့။ ဟိ ဟိ ၂၀၁၀ မှာ နောက်ထပ် social network အသစ်တွေ့ရင် နောက်ထပ် ပုို့စ်အတင် ကျဲဦးမယ် ဟုတ်တယ်မလား ချစ်မကြီး :D
၀ိတ်ကျသွားတယ်လား။ တယ်ကောင်းတာပဲ။ ကျမတော့ ၅နှစ် တောက်လျှောက်ထိန်းခဲ့တဲ့ ၀ိတ် နှစ်ကုန်ခါနီးမှ ကမှောက်ကမ ဖြစ်သွားတယ်။
၂၀၁၀မှာ ၀ိတ်ရအောင် ပြန်ချမယ်လို့ ကြိုတင် အသိပေးလိုက်ပါတယ်။:))
မင်္ဂလာနှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာရှိတဲ့သတင်း မင်္ဂလာရှိတဲ့စကားတွေပဲ ကြားရပြီး မင်္ဂလာရှိတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ကြုံဆုံနိုင်ပါစေလိှုီု့ဦးမင်းဇော် အန်တီခင်မင်းဇော် နဲ့ မောင်လေး အတွက် ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင့်
မီးလဲ ဒီနှစ်ထဲမှာ အားတိုင်းကစားတဲ့ အားကစားသမားဖြစ်သွားဒယ် ခစ်ခစ်
အားလုံးအတွက် အောင်မြင်မှုတွေ ပျော်ရွှင်စရာတွေကို ခေါ်ဆောင်လာတဲ့ ၂၀၁၀ဖြစ်ပါစေ..။
အမ ရည်မှန်းထားတဲ့ အရာတွေအားလုံး ၂၀၁၀ မှာ အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်...
အမတို့ မိသားစုအတွက် ပျော်စရာ ၂၀၁၀ ဖြစ်ပါစေ...
အရေအတွက် က အဓိကမဟုတ်ဘူးလေအမ...
ဒါပေမယ့် ၅၉ ဆိုတဲ့ ဂဏန်းကိုတော့ ကြာကြာမမြင်ရက်ဘူး...
၂၀၁၀ မှာ အားမာန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ဖွင့်မယ့် တံခါးအတွက် ကောင်းခြင်းအဖြာဖြာ ဝေဆာစေကြောင်း ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ...
လုပ်ချင်ရာ လုပ်လိုရာကိုသာ ဆက်သာလုပ်မကြည်ရေ.
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၂၀၁၀ ကတော့ ရောက်လာခဲ့ပြီ.
မဲဆောက်ရဲ့ နယူရီးယား ဗျတ်အိုးဖေါက်သံတွေ လွန်ခဲ့တဲ့
၅ နာရီတုန်းက အရှင်လတ်လတ်ကြားခဲ့ရတာ ရင်ခုန်သား.(မမေးကြေးနော်..ဟဲ)
"စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ဇွဲသန်သန် ချီတက်နေတဲ့ သူတွေ အတွက် ပန်းတိုင်ဆိုတာ ရောက်ကို ရောက်လာတယ် ဆိုတာ ဂိမ်းက ပေးတဲ့ သင်ခန်းစာပါ"
That'sagreat writing. I agree that. :)
ပန်းတောင်မမ တို့ မိသားတစုလုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့၍ ဘေးဘယာ ဝေးကွာပါစေသတည်း။
Happy new year အမရေ... နှစ်သစ်မှာ စာတွေ ပိုရေးနိုင်ပါစေ အမရေးချင်တဲ့ ၀တ္ထုတွေလည်း ပိုရေးနိုင်ပါစေ
စီဘောက်မတွေ့ လို့ဒိမှာတခုလောက်လည်း ကူညီတောင်းပါတယ်
အတာ အီးမေးလ်လိပ်စာလေးဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် တချက်လောက်ပြောပေးပါလား ကိုညွန့် ဇော်အကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်လို့သူနားထောင်ချင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ အန်တီရေ .. ။ ပို့စ်အရေးကျဲတာ သမီးက အဆိုးဆုံးထင်ပါတယ် .. ။ ၂၀၀၉က သိပ်အလုပ်များသွားခဲ့လို့ပါ .. ။ ၂၀၁၀ နှစ်ဝက်လောက်ဆိုရင်တော့ နည်းနည်းပေါ့သွားပြီ :)
မ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပြီးမှ ၂၀၀၉မှာ ပို့ စ်ဘယ်နှစ်ခုများ တင်ဖြစ်ပါလိမ့်လို့တွေးမိတယ်… မ ညီမက အဲလို ဇယားမရှိတာ မ ရေ… သေချာတာက နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ မရေးသလောက်ကို အရေးကျဲတာ… မ ပြောသလို ဘလော့ပိတ်ဖို့ တော့ ဘယ်တော့မှ မစဉ်းစားပေါင်နော်… ၂၀၀၈နဲ့ ၂၀၀၉နဲ့ ထင်ရှားတဲ့ ကွာခြားချက်ကတော့ ဘလော့ပေါ်က သံယောဇဉ်တွေပေါ့ မ ရေ… အံ့သြစရာသိပ်ကောင်းတဲ့ တွယ်ငြိမှုတွေပေါ့… ချစ်တဲ့ မ အတွက် စိတ်ဓါတ်ခွန်အားတွေ ပြည့်စုံစေမယ့် နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေလို့ …
နှစ်သစ် မင်္ဂလာပါ အစ်မရေ ..
၂၀၁၀ အတွက် အားမာန် အပြည့်နဲ့ ရှိနေတဲ့ အစ်မ နဲ့မိသားတစု ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ ကြပါစေ ။
ဘလောဂ့် လေးကိုလည်း အချိန်ရတဲ့အခါ စိတ်ပါတဲ့အခါ အကြောင်းသင့်တဲ့အခါ ဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပါစေ ။
အပြင်လောကကြီးမှာ တနေ့ နေ့တချိန်ချိန် မှာ ဆုံတွေ့ ချင်ပါသေးတယ် ။ ( နောက်နှစ်တွေမှာပေါ့ ..ဟိဟိ )
အသစ်တွေ့ မလားလို့ ရောက်လာပါတယ် ဒေါ်ခင်မင်းဇော်
အင်း ၂၀၁၀ ကို တော်တော်လေး အထဲရောက်လာပြီ။ အခု နောက် ပိုစ့်တွေ ထပ်ဖတ်ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။